Ngawaphi amandla alula okuqesha: iingcebiso ezilungileyo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Ngawaphi amandla okukhanya okuqesha
Siza kubona nini yeyiphi amandla okukhanya okuqesha, kunyanzelekile ukuba sazi konke ukusebenza kuyo ukuze ungasichithi kwaye ube nenkcitho engeyomfuneko okanye usilele kwaye izikhokelo zihlala zixhuma. Ukwazi ukuba ngawaphi amandla okukhanya okuqesha kubalulekile ukuba uchithe nje kwinqanaba lokukhanya kwaye uchithe umbane omncinci.
Ke ngoko, kweli nqaku siza kukuxelela yonke into oyifunayo ukuze ufunde ukuba ngawaphi amandla okukhanya okuqesha.
1 Yintoni amandla ombane
2 Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga namandla okukhanya okuqesha
3 Imigaqo yokufunda ukuba ngawaphi amandla okukhanya okuqesha
4 Ngubani kwaye njani amandla okhethiweyo
Ukuze sifunde ukuba ngawaphi amandla okukhanya okuqesha, kufuneka kuqala sazi ukuba lithetha ntoni eli gama. Amandla sisixa samandla esiveliswayo okanye esisetyenzisiweyo kwiyunithi nganye yexesha. Eli xesha linokulinganiswa ngemizuzwana, imizuzu, iiyure, iintsuku ... kwaye amandla alinganiswa kwii-joules okanye ii-watts.
Amandla aveliswa ngeendlela zombane alinganisa amandla okwenza umsebenzi, oko kukuthi, naluphi na uhlobo "lomzamo". Ukuwuqonda ngcono, masibeke imizekelo elula yomsebenzi: ukufudumeza amanzi, ukuhambisa i fan, ukuvelisa umoya, ukuhamba, njl. Konke oku kufuna umsebenzi okwaziyo ukoyisa imikhosi echasayo, amandla anjengomxhuzulane, amandla okruthakruthwano emhlabeni okanye emoyeni, amaqondo obushushu sele ekhona kwindalo esingqongileyo ... kwaye loo msebenzi ukwimo yamandla (amandla ombane, thermal, umatshini ...).
Ubudlelwane obusekwe phakathi kwamandla namandla bu isantya sokusetyenziswa kwamandla. Oko kukuthi, amandla alinganiswa njani kwiijoule ezisetyenzisiweyo kwiyunithi yexesha. Ijoule nganye etyiweyo ngomzuzwana yi-watt (watt) enye, yiyo le ke iyunithi yokulinganisa kwamandla. Kuba i-watt iyunithi encinci, i-kilowatts (kW) zihlala zisetyenziswa. Xa ubona ityala lombane, izixhobo zombane njalo njalo, ziya kuza kwi-kW.
Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga namandla okukhanya okuqesha
Eminye yeyona mibuzo iqhelekileyo ebuzwa xa kufanelekile ukwazi ukuba ngawaphi amandla okukhanya okuqesha ahambelana nobuninzi bokukhokelela xa kukho into eyahlukileyo kunesiqhelo okanye kuba akukho kukhanya ukuba sidibanisa umbane izixhobo ngaxeshanye.
Kwaye ukuphendula yonke le mibuzo kuyimfuneko ukubhekisa kwinani lezixhobo zombane ezisemakhayeni ethu. Kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba amandla ombane axhomekeke kwizinto ezininzi. Ukuba nendlu enkulu okanye encinci ayibalulekanga, kuba kunokwenzeka ukuba uhlale kwindlu enkulu ngokwaneleyo enezixhobo ezimbalwa zombane. Okuchasene nako kunokwenzeka. Indlu inokubanezixhobo zombane ezaneleyo kunye nomgangatho omncinci kwaye kufuneka ukuba namandla angaphezulu aqeshwe.
Ukuze wazi ukuba ngawaphi amandla okukhanya okuqesha, kufuneka ulazi inani lezixhobo onazo ekhayeni lakho nokuba uza kuzisebenzisa ngaxeshanye.
Imigaqo yokufunda ukuba ngawaphi amandla okukhanya okuqesha
Siza kubona ukuba yeyiphi eyona mithetho iphambili kunye ephambili ekufuneka ithathelwe ingqalelo ukuze sazi ukuba leliphi igunya lokukhanya eliqeshayo.
Ukunyuka kwamandla ombane anesivumelwano, kokukhona isixa esimiselweyo ekufuneka sihlawulwe. Le yinto ebalulekileyo ekufuneka ithathelwe ingqalelo kuba asinakho ukugqitha kumbane wesivumelwano kuba siza kuhlawula ngaphezulu. Injongo kukufunda ngakumbi okanye ngaphantsi kweendleko oza kuba nazo kwaye uqeshe into eyimfuneko ukwanelisa imfuno yombane.
Ukuba namandla amancinci okufumana isivumelwano akuthethi ukuba siya kuba nolondolozo olukhulu. Kucacile ukuba kuyo yonke i-kW uye ezantsi kwi-subcontracting uya konga i-50 euro ngonyaka. Nangona kunjalo, konke okanye ukonga kuyanyamalala ukuba uyasilela ekusebenziseni izixhobo ezininzi ngexesha elinye. Akukho mntu ufuna ukuchitha lonke ixesha esiya kwibhokisi yokungena ukusukela i-ICP iqhubeka ngokutsiba. Uyaphela ukukhanya ngokuvula i-oveni ngaxeshanye ubeke umatshini wokuhlamba kwaye oku kunokuba lula kakhulu ukuba kwenzeka rhoqo.
Ukuba oku kuyenzeka, kuya kufuneka uwonyuse amandla ekuvunyelwene ngawo, nokuba indibiza imali encinci. Ukugcina ukuncitshiswa kwamandla okusebenza kunokubiza kakhulu ukuba awubahlalutyi ngokuchanekileyo.
Ulwazi ngamandla kwaye nangona unokuthatha isigqibo malunga nokuqesha, kubalulekile ukuba wazi kakuhle. Kukho umda ophawulwe ngezizathu zokhuseleko xa usonyusa amandla. Ngokufanelekileyo, ayilulo lonke ufakelo lombane kuzo zonke izakhiwo neendawo ezixhasa amandla aphezulu. Ukuba ufuna ngaphezulu komda ovunyelweyo, kuya kufuneka uhlaziye ngokupheleleyo ufakelo. Ngaphandle koko, iingozi ezingafunekiyo zinokwenzeka.
Xa kuziwa ekunciphiseni amandla, nawe unelizwi lokugqibela. Nangona kunjalo, kufanele kuqatshelwe ukuba xa uthe wawa phantsi kwamandla, uya kuba nguwe ova ubunzima malunga noku. Ungawehlisa okanye uphakamise amandla njengoko ukhetha, ukuba nje ukuphindaphindwa kwe-0.1 kW kufunyenwe. Ukuba ekugqibeleni uchitha ukuthoba umbane, iindleko zokuwonyusa kwakhona ziya kuthetha ukuba lonke ulondolozo alusetyenziswanga.
Ngubani kwaye njani amandla okhethiweyo
Abathengi banoxanduva lokuvumelana nenkampani igunya lokuqeshwa. Eyona nto iqhelekileyo kukuba inkampani ngokwayo yenza ingcebiso ngokusekwe kufakelo lwayo kunye nenani lezixhobo. Ekugqibeleni, nguwe onelizwi lokugqibela kwaye unokuqesha imali oyifunayo. Umhambisi unyanzelekile ukuba amkele utshintsho kumandla ombane ngonyaka, nangona inokulungiswa ngokweemfuno zakho. Kuyacaca ukuba awungekhe uguqule ikhontrakthi yamandla rhoqo ngenyanga.
Ukwazi ukuba ubuqeshe, kukho iqhinga elingaze lisilele. Vula zonke izixhobo zombane endlwini yakho ngaxeshanye. Ukuba phakathi kwezi zixhobo ufumanisa i-oveni, isixhobo sokucoca umoya kunye nesicoci se-vacuum, kwaye ke i-ICP ayixhumi, kusenokwenzeka ukuba unamandla kakhulu kwisivumelwano. Amathuba apho kuya kufuneka unxibelelane uninzi okanye zonke izixhobo zombane ngexesha elinye endlwini yakho zimbalwa kakhulu okanye azisebenzi. Awudingi ukuba uzilungiselele. Uhlawula into ongasokuze uyisebenzise. Konke oku kuya kubonakala kumthetho osayilwayo wombane.
Ndiyathemba ukuba ngale ngcaciso ungafunda ngakumbi malunga namandla okukhanya okuqasha indlu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Uqoqosho lwaseKhaya » Ngawaphi amandla okukhanya okuqesha
Imihlobiso yeKrisimesi ehlaziyiweyo